डेंगुबाट काठमाडौंमा एक जनाको मृत्यु, ८३ जना विरामी - Kendrabindu Nepal Online News
डेंगुबाट काठमाडौंमा एक जनाको मृत्यु, ८३ जना विरामी
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १६:३१
काठमाडौं । डेंगुका कारण काठमाडौंमा एक जनाको ज्यान गएको छ । ८३ जनाको उपचार भइरहेको छ । काठमााडैं महानगरपालिका वडा नं. १६ मा एक जनाको ज्यान गएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । मृतकको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
गएको साउन २७ गते महानगरको वडा १५ मा पर्ने चमती क्षेत्रमा पहिलो पटक ३ जनामा यो समस्या देखिएको थियो । तीमध्ये एउटै
घरका श्रीमान् श्रीमती नै बिरामी परेका थिए । उनीहरुको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराइएको थियो । डेंगुले महानगरमा भयावह अवस्था लिएपछि काठमाडौं महानगरले जनचेतना फैलाउन थालेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले घर घरमा पुगेर रोगका लक्षण र बचावटका उपायका बारेमा जानकारी दिइरहेका छन् ।
घर, टोल, गल्ली, चोक सफा गर्न चुना छर्कने तथा पानी जम्ने खाडल पुर्ने कामलाई महानगरले तीब्रता दिएको छ । गएको वर्ष कार्तिक महिनामा पनि बालाजु र ढुङ्गेधारा क्षेत्रबाट ९ जना बिरामी पहिचान गरिएको थियो । यसरी बिरामी देखिएपछि संक्रमणलाई फैलिन नदिन घरदैलो र सफाइ कार्यक्रम गरिएको थियो ।
त्यस क्रममा ४७ घरका पानी ट्याङ्कीमा लामखुट्टेका लार्भा नष्ट गरिएको थियो । वडा १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले वडा १६ का अधिकांश भागमा संक्रमण देखिएको बताए । बसपार्क, बिष्णुमती नदी किनाराका अधिकांश भाग, नयाँबजार टाउन प्लानिङ् क्षेत्रमा संक्रमण धेरै छ ।
के हो डेंगु ?
डेंगु भाइरसको संक्रमणले हुने रोग हो । यो भाइरस एडिस प्रजातिको कालो र सेतो रङ मिसिएको छिरबिरे पोथी लामखुट्टेको सार्छ ।विश्वभर ट्रोपिकल मौसम भएका देशहरुमा यसको संक्रमण पाइन्छ ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रका नेपाललगायत भारत, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का तथा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा यसको समस्या छ । सामान्यतया यो रोग गर्मी मौसममा हुने भए पनि जलवायु परिवर्तनको असरले भाइरस बोक्ने लामखुट्टे जाडोमा पनि पाउन थालिएसँगै जाडो मौसममा पनि डेङ्गोको समस्या देखिन थालेको छ ।
संक्रमित लामखुट्टेले टोकेको ४८ घण्टामा रगतमा भाइरस फैलिन्छ । यसका लक्षण देखिन ३ देखि १३ दिनसम्म लाग्न सक्छ । सामान्यतयाः रुघा खोकी लाग्ने, जोर्नी दुख्ने, आँखाका दाना दुख्ने, शरीरमा डाबर आउने, खानामा अरुची हुने, जोनी तथा मांसपेशी दुख्ने यसका लक्षण हुन् । त्यस्तै पेट तथा आन्द्रामा गडबढी हुने यस रोगमा रगत जम्ने प्रक्रिया अव्यवस्थित भएर भित्री रक्त श्राव हुने समस्या पनि हुनसक्छ ।
यसरी आएको ज्वरो ५ देखि ७ दिनसम्म रहिरहन सक्दछ । केही बिरामीमा शुरु मै शरीरभरी खटिरा आउँछन् । त्यस्तै शरीरमा डण्डीफोर जस्ता डावरहरु देखिन्छन् । ज्वरो आईरहेको अवस्थामा नाक तथा गिजाबाट तथा छालामुनि रक्तश्राव हुन सक्छ ।
सफा पानीमा बस्ने यो प्रजातिका लामखुट्टेले दिनमा टोक्छन् । यसबाट बच्न पानी छोपेर राख्ने, लामो समयसम्म पानी जमाएर नराख्ने, पानीलाई बिर्कोले छोपेर राख्ने तथा दिनमा देखिने लामखुट्टे नष्ट गर्ने विधि अपनाउनु पर्छ । शरीर पूरा ढाकिने गरी कपडा लगाउनु पर्छ । लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न मल्हम जस्ता सामाग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ । झुलभित्र सुत्नुपर्छ ।
घर वरपर वा घर भन्दामाबाहिर कामगर्न जादाँ लामखुट्टेले टोक्छ कि ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । झ्याल र ढोकामा जाली लगाएर बन्द राख्नुपर्छ । पानी राख्ने भाडाहरु जस्तै पानी ट्याङ्की, गाग्री, दहीको कतौरा, बाल्टिन, ड्रम आदि सँधैं छोपेर राख्नुपर्छ । लामखट्टेको नियन्त्रणका लागि घर वरपर पानी जम्न नदिन खाल्डा-खुल्डी पुर्नुपर्छ । घर आँगन सफा राख्नुपर्छ ।
यो लामखुट्टेले सफा पानीमा फुल पार्ने हुनाले लामो समयसम्म एउटै ठाउँमा पानी जम्मा गरेर राख्नु हुँदैन । पुराना टायर, पानी जम्न सक्ने भाँडाकुँडा, पुराना बट्टा खाल्डो खनेर नष्ट गर्नुपर्छ । गमला फूलदानी एअर कुलर जस्ता पानी जम्ने सामाग्रीको पानी हप्तामा एक पटक नियमित रुपमा सुख्खा हुने गरी सफा गर्नुृपर्छ । त्यस्तै खानेपानीको पाइप तथा ढलहरु चुहिने भएमा तुरुन्त मर्मतको व्यबस्था गर्नुपर्छ ।
Prevभुटानको पोष्टमा ६ गोल हान्दै नेपाल फाइनल नजिक
कतै तपाईं यी कारणका पछि लागेर विवाह गर्दै त हुनुहुन्न ? हुनसक्छ गम्भीर भूल !Next
सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर
सापकोटाका विषयमा माइतीघरमा दुःख नगर्नुहाेस् – प्रचण्ड
प्रचण्डद्वारा नेताहरूलाई अन्य पार्टीमा निरीह भएर बस्नुुभन्दा नेकपामा मिल्न आउन आग्रह
सोनाम ल्होसार पर्वमा बिदा
उद्योगीहरूको गुनासोदेखि उपत्यकामा बन्द रहेका ट्राफिक लाईटहरू सुचारुसम्म (भिडियोसहित)
माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड पनि मर्चेन्ट व्यवसायमा प्रवेश
सरकारको कामको गति र लय मिलाउन जानेनौँ अनि आलोचना बढी भयो : पोखरेल (भिडियाेसहित)
उखु किसानको रकम नतिर्ने मिलहरुको बैंक खाता रोक्का हुने